အသိ အသက် ရှိတာခြင်း တူရင်
ကြေကွဲ သွေး ဘ၀ အသက်တွေ
သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေကို ဦးညွတ်
ခင်ဗျားတို့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ထဲက
တိုင်းပြည် သယံဇာတများပဲ ဖြစ်တယ်၊
ခင်ဗျားတို့ နှုတ်ခမ်းက အပြုံးစဟာ
လူထု သက်ပြင်းချသံတွေ ဖြစ်တယ်၊
ခင်ဗျားတို့ မျက်လုံးထဲက အလင်းစဟာ
သွေးစ သွေးနများပဲ ဖြစ်တယ်၊
စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်း နင်း ပေးဖို့လားလို့၊
ရှစ်လေးလုံး နေ့ရက်များ ပါတယ်၊
‘၀’လုံး ရွဲ့စောင်းစောင်းတွေ ပါတယ်၊
ကွဲအက် နှုတ်ခမ်းတွေ ပါတယ်၊
ခြေတပိုင်းပြတ်သွားတဲ့ ကလေးမလေး ပါတယ်၊
ခွေးလို ထဟောင်တဲ့ သေနတ်ကြောင့်
မျက်စေ့ တဖက်လပ်နဲ့ ကောင်လေး ပါတယ်၊
ယမ်းနံ့နဲ့ သဲ့သဲ့ ရှိုက်သံကြား
ပန်းဦး ကြွေသွားတဲ့ ကောင်မလေး ပါတယ်၊
မြေကြီးနဲ့ တောတောင်ကို ချစ်တဲ့
မျှစ်စို့တွေ ချိုးဖဲ့ ခံရသလိုမျိုး
ကျိုးပျက်သွားတဲ့ မိသားစုတွေ ပါတယ်၊
အဖျားအနာ ထူပြောနေတဲ့ လူထုတွေ ပါတယ်၊
သေကွဲ ရှင်ကွဲ ရဟန်းရှင်လူ
ခင်ဗျားတို့ ပိုရှူလိုက်တဲ့ လေထဲမှာ
စက်တင်ဘာ တလလုံး ပွန်းပဲ့ပေးလိုက်ရတယ်၊
လူထုကို အချစ်နဲ့ တိုင်းတာတဲ့ခေတ်၊
အသွေး အသား အသက် အသိ ရှိတဲ့ လူက
အသိ အသက် အသား အသွေး ရှိတဲ့ လူတွေအပေါ်
မျိုးဆက်သစ်နဲ့ မြေကမ္ဘာ ကျန်းမာရေးအတွက်
လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ခေတ်၊
ဘ၀ ဘ၀ချင်း အသက်ရှူသံတွေကြား
မြင့်မြင့်မြတ်မြတ် ဖူးပွင့်နိုင်တဲ့ ခေတ်လေ၊
ဟိုး တောင်တန်းမှာ ငြိမ်းချမ်း မွှေးရီ
ကျနော်တို့ အသက်ရှူသံထဲမှာ ပါတယ်၊
သုဝဏ္ဏဘူမိ ရင်ခုန်သံ စည်းချက်တို့
ဟောဒီ အသွေးအသားထဲ ခရီးဆက်နေကြ
ဟောဟိုက ကန္နိရီ ကိန္နရာ မောင်နှံဟာ
အလှဆုံး အရိပ်တွေ ကြဲဖြန့်ထားတဲ့အတိုင်း
သမိုင်းသစ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား၊
ကျနော်တို့ အတူ သွားကြမယ်၊
ကျနော်တို့ အတူ စားကြမယ်၊
တနိုင်ငံလုံးက လေကို မျှဝေရှူကြမယ်၊
ဘယ်တော့မှ ခြေချခွင့် မရရေးအတွက်
အနှစ် (၅၀) ကြီးထဲက
ကြေကွဲ သွေး အသက် ဘ၀တွေ
ဘ၀နဲ့ အသက် ရှင်သန်ဖို့
လွတ်လပ် မှန်ကန်တဲ့ အသိအမြင် ရှိတယ်။
ကိုယ့် အတွေးအမြင် အတောင်အလက်ဟာ
ဘယ်သူ့ထံမှ အစီရင်ခံစရာ မလိုဘူး၊
ဘယ်လို အမိုးအကာမှ မလိုပါဘူး။
ကိုယ့် မိသားစု ကိုယ့် နိုင်ငံ
ကိုယ့် ကမ္ဘာမြေ ဒုက္ခ သုက္ခတွေကို
လှလှပပ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းနိုင်ခွင့် ရှိတယ်။
မြေကြီးထဲ ငိုကြွေးနေကြတာ မဟုတ်ဘူး၊
ဒါ သူ့ တော်လှန်ရေး မဟုတ်ဘူးလား၊
ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ မြင့်မြင့် ပျံကြ၊
လ ရောင် မသာတာကို မြင်တွေး
တော်လှန်ရေး အသိနဲ့ ပေါင်းစပ်ကြည့်ရမယ်၊
ကျနော်တို့ မြေကြီး အစစ်
နွေဦးဟာ ကျနော်တို့ကို စောင့်နေပါ့၊
လာခဲ့ကြတော့ ဟေ့ တဲ့
နှင်းဆီ တထောင် ခူးဆွတ်
ထိုး ထွက် လာခဲ့ပြီ။ ။
Posted by wai lin Tun at 3:53 PM Labels: နေဇော်နိုင်
Jacobo Ramirez said...
Good your Blog! here is me blog: http://jacobo-ramirez.blogspot.com/
Xxxx xxx xxxx!xxxx xx xx xxxx:
ဟေ့... ပျောက်ချက်သားကောင်းလှတဲ့ ကိုပုညကြီး ပြန်ပေါ်လာပြီ။ တယ်ကောင်းလှပါကလား. အလုပ်ထဲမှာ နစ်နေလို့ စာတွေမရေးနိုင်တော့ဘူး ထင်နေတာ .. မျိုးဆက်သစ် ရပြီဆိုတော့ ကိုယ်တွေ စိတ်တွေ နုပျိုလန်းဆန်း လာတယ်ထင်ပါ့..
နွေဦးကြိုက်သူကြီးတယောက်လည်း အနားရောက်နေတယ်။ နောက်များဆို လေလှိုင်းပေါ်မှာ စာသံ.ကဗျာသံတွေ ညံနေတော့မယ်။
တင်ပေးတဲ့ ဆရာနှင်းခါးမိုးကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
ကောင်းလိုက်တဲံ ကဗျာ ဗျာ။ ကဗျာရဲ့ စာကြောင်းတိုင်းဟာ ဓားတစ်ချောင်းလိုပဲ။